Ozi kacha ọhụrụ gbasara Fecafoot site na Nigeria & ụwa | TAA
Jupp Heynckes: atụghị egwu Robert Lewandowski-Cristiano Ronaldo
Home Tags Ụkwụ ụkwụ
Cameroon na-akpọsa onye isi nchịkwa, họpụta Alexandre Belinga na oge
Ọrụ Kọmitii nke Normalization na-agba chaa chaa chaa chaa na Cameroon (Fecafoot).
AFCON 2019: CAF ga-amalite nyocha ụlọ ọrụ Jenụwarị 11
Nzukọ nke Afrika (CAF) ga-amalite nyocha ụlọ ọrụ maka 2019 Africa Cup of Nations na Cameroon na Jenụwarị 11, 2018.
WCQ: Onye ọchụnta ego kwere nkwa na Super Eagles $ 20,000 maka mgbaru ọsọ
Otu ọchụnta ahia, Aka Udofia, enyela Super Eagles $ 20,000 maka ihe mgbaru ọsọ ọ bụla ha ga-eme na njedebe nke abụọ na Monday na 2018 FIFA World Cup.
Cameroon enweghị ike ịhapụ Nigeria - Broos
Onye isi na-eduzi Cameroon, bụ Hugo Broos, kwuru na ha agaghị enwe ike ịfu Nigeria n'oge mmemme qualifiers 2018 FIFA World Cup.
Roger Milla kwadoro FIFA banyere normalization c'ttee maka ntuli aka FECAFOOT
Otu onye na-ahụ maka egwuregwu football nke Cameroon, bụ Roger Milla na Monday, boro Federation of International Football Federation (FIFA) ebubo ime atụmatụ ịkụda ịgba ọsọ football na mba ya.
Nsogbu Cameroon agaghị eme ka Ọdụm Indomitable ghara ịdị ize ndụ - Amuneke
Emmanuel Amuneke ji olu dara ụda na-agwa ndị Super Eagles okwu - ebula nsogbu na gọọmenti football Cameroon nke bụ ihe ịga nke ọma na mpempe akwụkwọ FIFA World Cup abụọ na-abịa n'ihu megide Indomitable Lions.
FIFA setịpụrụ normalization c'ttee na-agba ọsọ Cameroon FA
FIFA setịpụrụ 'kọmitii' normalization 'iji gbaa ọsọ na Cameroon Football Federation (Fecafoot).
AFCON: CAF kwadoro ozi nleta na Cameroon
Ndị nnọchiteanya nke 2019 African Cup of Nations na Cameroon ka etinyeghachiri ya site na Njikọ nke African Football (Caf).
Hayatou laghachi azụ na Ahmad maka okwu na 2019 AFCON
Issa Hayatou, bụ onye na-ahụ maka ndị na-agba ọsọ ndụ n'Africa, ekwuola ihe ndị onye na-anọchi ya, Ahmad kwuru, banyere njikere Cameroon maka ịnabata 2019 Africa Cup of Nations.
Cameroon gosipụtara "nkwenye" ​​na nzaghachi nke CAF
Cameroon football football gọọmenti gosipụtara "oké mgbagwoju anya" ha na nzaghachi site n'aka onye isi oche CAF Ahmad Ahmad maka atụmanya ha maka iweta 2019 Africa Cup of Nations.
Ndi Didier Drogba kelere anya n'aha Liverpoool Mohamed Salah maka ikpuchi akuko ya dika ihe kachasi elu n'enye Afrika aka n'otu oge nke ndi isi nke England.
Kọmitii Nchịkwa Mba (NEC) nke Peoples Democratic Party (PDP) kwuru na n'oge na-adịghị anya, ọ ga-eme ka ndozi nke onyinyo na-eduzi "ụzọ ndị ọzọ na-agbaso iji nweta mgbake mba."
Dika onye ebubo a na-ekwu na ọ ga-adịrị ala ka ọ ghara ịkụcha ya
Otu onye oru 30, Kabiru Tajudeen, bu onye kwuru na o kpochapu ya na osisi ogwu maka inye ya aka, na Wednesday bu n'ihu ulo ikpe ikpe nke Ikeja.
A na - akọ na ndị ntorobịa na - egbu mmadụ na - abanye n'ogige IDP na Benue
Iwu ndị uweojii na-ahụ maka obodo Benue emeghachiwo omume na igbu otu Miss Zoho, otu n'ime ndị nọpụrụ onwe ha n'ime obodo.
Vladimir Putin: New Western Syria egbu ga-spark 'ọgba aghara'
Ugbua ohuru ozo nke agha na Syria ga-akpalite "ọgba aghara" na mmekorita nke mba uwa, onye ndu Russia bu Vladimir Putin gwara onye omere ya Iranian Hassan Rouhani on Sunday.
Raheem Sterling agụụ na-agụ n'ihi na ihe mgbe Manchester City Premier League mmeri
Manchester City, bụ Raheem Sterling, na-ekwu na agụụ na-agụ ya na ya ga-emeri Premiya Njikọ ọzọ, na-adọ ndị na-asọ mmeri aka ka ha ghara inwe afọ ojuju ka ha na-achụkwu otuto.
Fed govt nwere mmasị na devolution nke ike - Ngige
John Terry dara mbà dị ka ụlọ Hull jide Villa
President Donald gbalịrị ịnabata Muhammadu Buhari nke Nigeria na White House